कोरोना भाइरससम्बन्धी बागमती प्रदेशको अवस्था – इन्सेक
मकवानपुर ०७६ चैत २५ गते
कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण रोकथामको तयारीका लागि बागमती प्रदेश सरकारले गरेको तयारीका बारेमा प्रदेश प्रमुख विष्णुप्रसाद प्रसाईले सामाजिक विकास मन्त्री युवराज दुलालसँग जानकारी लिनुभएको छ ।
प्रदेशमा कोरोना विरुद्ध लड्नका लागि प्रदेश सरकारले गरेको कामका विषयमा चैत २५ गते मन्त्री दुलाललाई बोलाएर उहाँले जानकारी लिनुभएको थियो ।
कोरोना सङ्क्रमणबाट बच्नका लागि स्वास्थ्य संस्था, आइसोलेशन, क्वारेन्टाइन तयारी हालतमा सबै सुविधासहित राख्न प्रदेश प्रमुख प्रसाईंले निर्देशन दिनुभएको छ ।
प्रदेश प्रमुखलाई मन्त्री दुलालले बागमती प्रदेशका चार स्थानबाट कोरोना जाँचको ल्याब परीक्षण गरिएको जानकारी गराउनु भयो ।
प्रदेश राजधानी हेटौंडा, धुलिखेल, काठमाडौँ र चितवनबाट कोरोना सङ्क्रमणको परीक्षण भइरहेको सो अवसरमा मन्त्री दुलालले जानकारी दिनु भएको थियो ।
इन्सेक धादिङ जिल्ला प्रतिनिधि सिताराम अधिकारीका अनुसार गल्छी गाउँपालिका-६ बैरेनीस्थित बागेश्वरी माध्यमिक विद्यालयको क्वारेन्टाइनमा राखिएका मध्ये १७ जना पुरुषलाई चैत २५ गते घर पठाइएको छ ।
उनीहरू रोजगारीका लागि भारतमा रहेको र कोरोना भाइरसको महामारी फैलिएपछि नेपाल आएका थिए । क्वारेन्टाइनमा बसेको १४ दिन पुरा भएपछि घर पठाइएको सो गाउँपालिकाले जनाएको छ ।
घर गएकाहरूमा गल्छी गाउँपालिका-२ का एक जना र वडा नम्बर ८ का १६ जना रहेका छन् । उनीहरूको स्वास्थ्य अवस्था सामान्य देखिएकोले घर पठाइएको गाउँपालिकाका स्वास्थ्य शाखा प्रमुख रामप्रसाद ज्ञवालीले जानकारी दिनुभयो ।
यसैगरि नीलकण्ठ नगरपालिका-३ जिल्ला वन कार्यालयको क्वारेन्टाइनमा राखिएका १० जनालाई पनि चैत २५ गते घर पठाइएको छ ।
नीलकण्ठ नगरपालिका-६ भोर्ले निवासी १० जना भारतमा काम गर्दै आएका थिए । १५ दिनको बसाइपछि उनीहरू पनि घर गएका हुन् ।
उनीहरूको स्वास्थ्य अवस्था राम्रो भएकोले डिस्चार्ज गरिएको नीलकण्ठ नगरपालिकाका स्वास्थ्य संयोजक विष्णु रिजालले जानकारी दिनुभएको छ ।
खनियाबास गाउँपालिका-२ क्यूङ गाउँमा इन्सेकको समन्वयमा खाद्यान्न उपलब्ध गराइएको छ ।
वडा समितिले वडाका विपन्न बासिन्दाहरूको लागि खाद्यान्न सकिएपछि समस्या भएको भन्दै पाँच दिन अघिदेखि खाद्यान्न उपलब्ध गराउन माग गर्दै आएकोमा इन्सेकको समन्वयमा खाद्यान्न उपलब्ध गराइएको हो ।
इन्सेक अनलाइनमा चैत २३ गते खाद्यान्न सकिएको समाचार सार्वजनिक भएपछि २४ गते गाउँपालिकाले २५/२५ किलोग्राम चामल, सावुन र तेल उपलब्ध गराएको वडा अध्यक्ष टेकबहादुर तामाङले जानकारी दिनुभयो ।
इन्सेक नुवाकोट जिल्ला प्रतिनिधि नवदीप श्रेष्ठका अनुसार तादी गाउँपालिकाले आफ्नो क्षेत्रमा लकडाउनको कारण समस्यामा परेमा मजदुरलाई राहत प्रदान गरेको छ ।
गाउँपालिकाले सडक निर्माण, भवन निर्माण, विद्युतसँगै खानेपानीको क्षेत्रमा काम गर्ने ७८ जना मजदुरहरूलाई खाद्य सामग्री प्रदान गरेको हो ।
पञ्चकन्या गाउँपालिकाले कोरोना रोकथामको लागि कोष स्थापना गरेको छ । गाउँपालिकाले १० लाख रुपियाँ, प्रदेश सरकारबाट प्राप्त १० लाख रुपियाँ गरेर २० लाखको कोष स्थापना गरेको गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नरेश पुडासैनीले जानकारी दिनुभयो ।
कोषमा स्थानीय र सङ्घसंस्थाहरूले नगद तथा मास्क, पीपीइ जस्ता सामग्री प्रदान गरेका छन् भने कर्मचारीहरूले आफ्नो पाँच दिनको तलब कोषमा दिने निर्णय भएको प्रशासकीय अधिकृत पुडासैनीले बताउनु भयो ।
इन्सेक रसुवा जिल्ला प्रतिनिधि हेमनाथ खतिवडाका अनुसार जिल्ला भरका स्थानीय तहले असङ्गठित क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिक वर्ग तथा असहायलाई उपलब्ध गराउने राहतसम्बन्धी मापदण्ड अनुरुप लगत लिने काम सुरू गरेका छन् ।
नौकुण्ड गाउँपालिका तीनजना मात्र असङ्गठित क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिक तथा असाहय रहेको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ ।
वडा-वडाबाट लगत लिने काम भने अझै सकिएको छैन । जिल्ला बाहिरका ११ जना श्रमिक भेटिएको गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत घनेन्द्र भुजेलले बताउनु भयो ।
उत्तरगया गाउँपालिका वडा १ देखि ६ सम्म ९ सय ९४ जना रहेको प्रारम्भिक लगत आएको उपाध्यक्ष चमेली गुरुङले बताउनुभयो ।
आमाछोदिङमो गाउँपालिकामा पनि श्रमिकको लगत लिने काम सकिएको छैन । यस गाउँपालिकामा २ सय ४२ जनाको प्रारम्भिक लगत सङ्कलन भएको छ ।
आमाछोदिङमो गाउँपालिका निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत छेवाङ तामाङका अनुसार वडा नं ४ मा ३७ जना स्थानीय र भारतका तीन जना असङ्गठित क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिक रहेका छन् ।
यस्तै गोसाइकुण्ड गाउँपालिकामा २ सय ४१ जना असङ्गठित क्षेत्रमा कार्यरत मजदुरहरू रहेका छन् । कालिका गाउँपालिकाले असङ्गठित क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिकको लगत लिने काम सकेको छ । जस अनुासर कुल २ सय ६७ जनालाई राहत वितरण गरिएको कालिका गाउँपालिका उपाध्यक्ष भवानीप्रसाद न्यौपानेले बताउनु भयो ।
तिरु र गोगनेमा घरघरमा गएर रुघाखोकी लागेका बिरामीको स्वास्थ्य परीक्षण गरिएको छ । यहाँका बासिन्दा स्वास्थ्य सेवाको पहुँचबाट टाढा रहेकाले घरघरमा स्वास्थ्य परीक्षण तथा उपचार गरिएको उत्तरगया गाउँपालिका स्वास्थ्य शाखा प्रमुख रविन्द्र ठकुरीले बताउनु भयो ।
जिल्लामा रहेका स्वास्थ्य संस्था तथा एम्बुलेन्स चालकलाई पीपीई सेट, इन्फारेड थर्मोमिटर, एन-९५ माक्स अभाव भएको जनाइएको छ ।
इन्सेक भक्तपुर जिल्ला प्रतिनिधि रमेश गिरीका अनुसार भक्तपुर अस्पताल दूधपाटीमा २५ गतेदेखि कोरोना भाइरस (कोभिड-१९) का सम्भावित सङ्क्रमित बिरामीको परीक्षणका लागि बुथ राखिएको छ ।
अस्पतालको इमरजेन्सी वार्डको बाहिर बुथ राखिएको भक्तपुर अस्पतालकी मेडिकल सुपरिटेण्डेण्ट डा सुमित्रा गौतमले जानकारी दिनुभयो । राष्ट्रिय अनुसन्धान केन्द्र र अमेरिका नेपाल मेडिकल फाउण्डेशनको सहयोगमा उक्त बुथ राखिएको हो ।
अस्पतालकी मेडिकल सुपरिटेण्डेण्ट डा. गौतमले कोभिड-१९ सम्भावित सङ्क्रमितको घाँटीबाट र्‍याल निकाल्ने क्रममा चिकित्सकलाई पनि कोरोना भाइरस सर्नबाट जोगाउन बुथ राखिएको बताउनुभयो ।
बुथ बाहिर रहेको कोरोना आशङ्काका बिरामीको बुथ भित्र बसेर चिकित्सकले घाँटीबाट र्‍याल निकाल्ने भएकाले रोग सर्ने सम्भावना शुन्य हुनेछ ।
सङ्घीय सांसद महेश बस्नेतले चैत २५ गते मध्यपुर थिमी नगरपालिका-१ लोकन्थली मनोहरा नदी किनारामा रहेको सुकुम्बासी बस्तीमा पुगेर ७ सय ५० घर परिवारलाई राहत वितरण गर्नु भएको छ ।
त्यसैगरी सरकारले लागू गरेको लकडाउनमा दैनिक मजदुरी गरेर खानु पर्नेहरू भोकै बस्नु नपरोस् भनेर स्थानीय तहले राहत वितरण सुरू गरेपछि करोडौँको सम्पत्ति भएकाहरू पनि राहतको लाइनमा बसेपछि वितरणमा समस्या भएको मध्यपुर थिमी नगरपालिकाका प्रमुख मदनसुन्दर श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो । सरकारी जागिरेदेखि विदेशमा बस्नेहरूका परिवार समेत राहत लिन आएको उहाँले बताउनु भयो ।
भक्तपुर प्रतिनिधि गिरीकै अनुसार स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले सातओटै प्रदेशमा कोभिड-१९ को रोकथाम र नियन्त्रणका लागि आवश्यक कर्मचारी पहिचान गर्न कर्मचारी खटाएको छ ।
मन्त्रालयमा आयोजित नियमित पत्रकार सम्मेलनमा प्रवक्ता डा. विकास देवकोटाले मन्त्रालयका ११ तहका कर्मचारी नेतृत्वमा टोली खटाई तीन दिनभित्र ती प्रदेशमा कति आवश्यक कर्मचारी कति चाहिन्छ सो सिफारिस गरेर प्रतिवेदन पेश गर्न निर्देशन दिएको बताउनु भयो ।
यसैगरी चैत महिनामा विदेशबाट आएका मानिसको पनि उपत्यकामा रहेका स्थानीय तहको समन्वयमा नमूना परीक्षण गरिने उहाँले जानकारी गराउनु भयो ।
इपिडिमियोलोजी तथा सरुवा रोग नियन्त्रण महाशाखा, नेपाली सेना र सशस्त्र प्रहरीको सहयोगमा नमूना सङ्कलन गरी परीक्षण गर्ने उपत्यकामा स्थानीय तहका प्रमुख र वडा अध्यक्षले समन्वय गर्ने उहाँले बताउनु भयो ।
सङ्घीय संसद सचिवालयले नेपाल सरकारले स्थापना गरेको केन्द्रीय राहत कोषमा १ करोड रुपियाँ जम्मा गरेको छ । सचिवालयले महालेखा नियन्त्रकको कार्यालय मार्फत चैत २५ गते १ करोड १ लाख ३२ हजार ८ सय रुपियाँ कोषमा पठाएको सचिवालयका प्रमुख लेखा नियन्त्रण बसन्तराज सिग्देलले जानकारी दिनुभयो ।
काठमाडौँ महानगरपालिकाले विभिन्न वडामा खाद्यान्न राहत वितरण गर्दै आएको छ । दैनिक ज्यालादारी गरेर छाक टार्ने परिवारलाई लकडाउनका कारण रोजगारी प्रभावित भएपछि महानगरपालिकाले राहत वितरण गर्दै आएको छ ।
काठमाडौँ महानगरपालिका-१५ ले स्वयम्भू तथा त्यस आसपास क्षेत्रका १ हजार २ सय विपन्न परिवारलाई राहत वितरण गरेको जनाएको छ ।
इन्सेक सिन्धुली जिल्ला प्रतिनिधि बिमला पाण्डेका अनुसार जिल्ला प्रशासन कार्यालय सिन्धुलीले लकडाउनलाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न वैशाख ३ गते सम्मका लागि निषेधाज्ञा जारी गरेको छ ।
अत्यावश्यक बाहेक कुनै पनि सवारी साधन चलाउन नदिने तथा नागरिकलाई घरबाहिर जान नदिने भएको छ । फिक्कल गाउँपालिकाले सबै स्वास्थ्य संस्थामा अत्यावश्यक औषधिहरू पुर्‍याएको जनाएको छ ।
गाउँपालिकाले मध्यपहाडी राजमार्गमा अलपत्र परेका नागरिकलाई गन्तव्यसम्म पुर्‍याउन सहयोग गरिरहेको जानकारी दिएको छ ।
कमलामाई नगरपालिकाले भिमान हेल्थ डेस्क र इलाका प्रहरी कार्यालयलाई आवश्यक औषधि तथा व्यक्तिगत सुरक्षा सामग्री प्रदान गरेको छ ।
इन्सेक दोलखा जिल्ला प्रतिनिधि उद्धव पोखरेलका अनुसार मेलुङ गाउँपालिकामा सम्भावित कोरोनाको सङ्क्रसङ्क्रमणलाई नियन्त्रणका लागि दुई ओटा एम्बुलेन्स, पाँच स्वास्थ्य चौकी र चार सामुदायिक स्वास्थ्य इकाईमा उपलब्ध स्वास्थ्य सामग्री सहित ३४ जना स्वास्थ्यकर्मी तयारी अवस्थामा रहेका छन् ।
मेलुङ गाउँपालिका भित्र कुनैपनि संस्था तथा व्यक्तिले अनुमति बिना राहत वितरण गर्न नपाउने निर्णय गरेको गाउँपालिकाले जनाएको छ ।
राहत वितरणलाई एकद्वार प्रणालीबाट वितरण गर्दा प्रभावकारी हुने गाउँपालिकाका प्रवक्ता हिरा थोकरले बताउनु भयो ।
काठमाडौँदेखि अनुमति बिना माईक्रोबसमा चरिकोट आइपुगेका २२ जना कालिन्चोक गाउँपालिकाका बासिन्दालाई गाउँपालिकाको निगरानीमा क्वारेन्टाइनमा राख्ने गरी कालिन्चोक गाउँपालिका उपप्रमुख कालिका पाठकले जिम्मा लिनुभएको छ । उनीहरूलाई जिल्ला प्रहरी कार्यालयले गाडी सहित नियन्त्रणमा लिएको थियो ।
लकडाउनको घोषणा पूर्व जिल्लामा विभिन्न विकास निर्माणका काममा रहेका जिल्ला बाहिरका असङ्गठित ७ सय कामदारले घर फर्कन स्थानिय प्रशासनमा माग गरेका छन् ।
इन्सेक चितवन जिल्ला प्रतिनिधि दीपेन्द्र अधिकारीका अनुसार भरतपुर राष्ट्रिय पंक्षी रोग अन्वेषण प्रयोगशाला भरतपुरमा कारोना परीक्षण ल्याब स्थापना गरिएपछि चैत २५ गते १९ जनामा कोरोना परीक्षण गरिएको छ । परीक्षण गरिएका सबै जनाको रिपोर्ट नेगेटिभ आएको डा. कृष्णसागर शर्माले बताउनु भयो ।
इन्सेक सिन्धुपाल्चोक जिल्ला प्रतिनिधि नातिबाबु धितालका अनुसार एम्बुलेन्सले बिरामी नबोकेपछि चैत २५ गते एम्बुलेन्स चालकहरूलाई पीपीई वितरण गरिएको छ ।
जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालयबाट सुरक्षा सामग्री पीपीई १४ थान वितरण गरेको हो । देनिक ज्यालादारी मजदुर तथा विपन्न परिवारलाई खाद्यान्न वितरण गर्नको लागि चौतारा साँगाचोकगढी नगरपालिकाले ५० लाख रुपियाँ र बलेफी गाउँपालिकाले २० लाख रुपियाँको राहत कोष खडा गरेका छन् ।
असङ्गठित श्रमिकहरूलाई राहत उपलब्ध गराउने उद्देश्यले लगत सङ्कलन गर्ने काम सबै गाउँपालिका तथा नगरपालिकाले गरिरहेका छन् ।
जलविरेको क्वाराइन्टाइनमा रहेका पाँच जनालाई चैत २५ गते घरमा पठाएको जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालयका प्रमुख दुर्गादत्त चापागाईंले बताउनुभयो ।
त्यसैगरी सुनकोशी गाउँपालिकामा रहकोको क्वाराइन्टाइन केन्द्रमा लिशङ्खुपाखरका तीन जनालाई चैत २४ गतेदेखि राखिएको छ ।
चैत २५ गतेसम्म मेलचौर र सुनकोशीमा गरी आठ जनालाई क्वाराइन्टाइनमा राखिएको छ भने चार जना आइसोलेशनमा राखिएको छ ।
इन्सेक ललितपुर जिल्ला प्रतिनिधि दीपकप्रसाद घिमिरेका अनुसार पाटन अस्पतालमा ४१ जनाको स्वाब परीक्षण गरिएकोमा ३९ जनाको नेगेाटिभ रिपोर्ट आएको छ भने दुई जनाको रिपोर्ट आउन बाँकी रहेको छ ।
विपन्न परिवारलाई राहत वितरणका लागि ललितपुर महानगरपालिकामा १८ हजार १ सय २४ परिवारका ६४ हजार ९ सय ५२ जनाको तथ्याङ्क सङ्कलन भएको ललितपुर महानगरपालिकाका सामाजिक विकास समिति संयोजक दिनेश कार्कीले बताउनु भयो ।
पाटन अस्पतालमा दुई जना बिरामीलाई कोभिड-१९ को शङ्कामा आइसोलेशन वार्डमा भर्ना गरिएको अस्पतालका निर्देशक डा. विष्णु शर्माले बताउनु भयो ।
गोदावरी नगरपालिकामा ७ हजार १ सय १० परिवारको तथ्याङ्क सङ्कल गरिएको नगरपालिकाले जनाएको छ ।
त्यसैगरी महालक्ष्मी नगरपालिकामा १२ हजार १ सय ४५ परिवारको तथ्याङ्क सङ्कलन भएको महालक्ष्मी नगरपालिकाका प्रमुख रामेश्वर श्रेष्ठले बताउनु भयो ।
इन्सेक रामेछाप जिल्ला प्रतिनिधि नवराज घिमिरेका अनुसार चैत २५ गते ६५ जना क्वारेन्टाइनमा रहेका छन् । हालसम्म जिल्लामा विभिन्न क्वारेन्टाइनमा राखिएका १६ जना १४ दिन क्वारेन्टाइनमा बसेर छुटेका छन् ।
जिल्लामा सवारी सञ्चालन तथा सर्वसाधारणको आवागमनमा प्रहरीले कडाइ गरेको छ । बिहान र साँझ अत्यावश्यक पसलहरू खोल्दा बजारमा मानिसहरूको अनावश्यक भिड लागेकोले चैत २५ गतेदेखि बिहान १० बजेदेखि दिउँसो १ बजेसम्म मात्र अत्यावश्यक पसलहरू खोल्न दिने स्थानीय प्रशासनले निर्णय गरेको छ । रामेछाप जिल्लाबाट हालसम्म कोरोना नमूना परीक्षण गरिएको छैन ।
इन्सेक काभ्रे जिल्ला प्रतिनिधि हिरामान तामाङका अनुसार कोराना भाइरस रोकथामका लागि स्वास्थ्यकर्मीलाई तामिल नभएको स्वास्थ्यकर्मीले गुनासो गरेका छन् । जिल्लाका १३ ओटा स्थानीय तहका स्वास्थ्य संयोजकहरूले तालिम नभएको गुनासो गरेका हुन ।
खानीखोला गाउँपालिकाका स्वस्थ्य संयोजक रामपुकार यादवले तालिम नपाए पनि आफू नआत्तिएको र स्थानीय स्वास्थ्यकर्मीलाई निर्धक्क भएर काम गर्न गार्‍हो भएको बताउनु भयो ।
भम्लु गाउँपालिकामा पनि दैनिक खटिने स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई तालिम नभएको भुम्लु गाउँपालिकाका स्वास्थ्य संयोजक सुदर्शन भट्टराईले बताउनु भयो ।
जल्ला प्रशासन कार्यालय काभ्रेले लकडाउनलाई थप कडाइ गर्ने निर्णय गरेको छ । प्रमुख जिल्ला अधिकारी श्रवणकुमार तिमल्सिनाले चैत २५ गतेदेखि औषधि उपचार, खाद्य वस्तु खरिद जस्ता अत्यावश्यक काममा बाहेक कुनै पनि व्यक्ति घरबाट नस्किन नपाउने आदेश जारी गर्नुभएको छ ।
धुलिखेल नगरपालिकाले यो वर्षको बिस्केट जात्रा नगर्न आग्रह गरेको छ । कोरोना भाइरसका कारण बिस्केट जात्रा नगर्न आग्रह गरिएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत तारानाथ लुईंटेलले जानकारी दिनुभयो ।
इन्सेक मकवानपुर जिल्ला प्रतिनिधि पुष्पराज अधिकारीका अनुसार स्थानीय तहले गरेका प्रयासहरूमा स्वास्थ्य उपकरणको अभावले समस्या देखिएको छ ।
पर्याप्त रूपमा स्वास्थ्य सामग्री र उपकरणहरू नहुँदा ज्वरो जाँचमा समस्या परिरहेको स्थानीय तहका प्रमुखहरूले गुनासो गरेका छन् ।
स्थानीय तहले पटकपटक उपकरण तथा स्वास्थ्य सामग्री खरिद गर्न खोजे पनि बजारमा सहज रूपमा उपलब्ध नभएका कारण सेवा प्रवाहमा ढिलो भइरहेको बताएका हुन् ।
कैलाश गाउँपालिका-९ नामटारमा फिभर गनको प्रयोग गरी ज्वरो जाँच गर्न थालिएको छ । कैलाश गाउँपालिकामा डाँडाखर्क, गोगने, कालिकाटार, नामटार र भार्तामा गरी पाँच ओटा स्वास्थ्यचौकी रहेका छन् ।
फिभर गन उपलब्ध हुनासाथ पाँच ओटै स्वास्थ्य चौकीमा ज्वरो जाँच केन्द्र स्थापना गर्ने तयारी भइरहेको कैलाश गाउँपालिकाका अध्यक्ष टङ्क मोक्तानले बताउनु भयो ।
मनहरी गाउँपालिकाले दुई ठाउँमा फिभर क्लिनिक सञ्चालन तथा लकडाउन कार्यान्वयन गराउन लागि परेको जनाएको छ ।
गाउँपालिका अध्यक्ष एकराज उप्रेतीले गाउँपालिका भित्र उपलब्ध साधन स्रोतको उच्चतम प्रयोग गरेर सचेतनाका कामहरू भएको बताउनु भयो ।